Command Scratchpad: Ny fomba haingana indrindra ahafahana miditra sy manavao ny Salesforce amin'ny tranonkala rehetra | Martech Zone
Ireo mpitantana kaonty saika amin'ireo orinasam-pivarotana rehetra dia tototry ny fitaovana fivarotana be loatra izay nozaraina ho tsy miankina amin'ny azy ireo CRM. Izy io dia manery ny mpivarotra hiditra amin'ny làlan-kiasa mandreraka sy mandreraka amin'ny fitetezana ireo mandroso sy miverina eo anelanelan'ny fitaovana, fitantanana tabilao fitetezana am-polony, fanindriana tsy misy fotony, ary fanaovana kopia sy fametahana manasatra, mandritra izany fotoana izany no manandrana manavao ny Salesforce. Vokatr'izany dia mihena ny fahombiazan'ny isan'andro, mamokatra, ary farany, fotoana anaovan'ny mpivarotra ny asany - mivarotra.
Didy Scratchpad dia nanomboka, nanokatra ny fomba haingana indrindra hidiran'ny mpivarotra sy fanavaozana ny naoty, ny lahasa ary ny Salesforce, amin'ny rindrambaiko na vondrom-piarahamonina mpivarotra - maimaimpoana.
Taorian'ny niresahana mivantana tamin'ireo mpitantana kaonty an'arivony maro avy amin'ny fikambanana mpivarotra amin'ny habe rehetra, dia fantatray fa nandany mihoatra ny antsasaky ny fotoanany tamin'ny fanavaozana ny Salesforce izy ireo fa tsy ny fivarotana. Ny mpitantana kaonty dia te-hanavao ny Salesforce haingana kokoa fa tsy hanova ny sahan-keviny sy handrava ny lalan'ny fiasan'izy ireo, mba hahafahan'izy ireo miresaka bebe kokoa amin'ny mpanjifa sy hifampiraharaha bebe kokoa. Ny Scratchpad Command dia mamela ny mpampiasa Salesforce rehetra eto an-tany hanao ireo fanavaozana ilaina ilain'izy ireo, avy amin'ny tranokala rehetra, tsy mila manova tabila, maimaimpoana. Haingam-pandeha. Tsotra izany. Ary mahafinaritra ny mampiasa.
Pouyan Salehi, mpiara-manorina sy CEO an'ny Scratchpad
Miaraka amin'ny Command Scratchpad, amin'ny tsindry iray monja dia afaka mamorona fifandraisana, kaonty, fotoana, asa na hetsika vaovao ireo mpampiasa ary manao fanavaozana ny saha na zavatra manokana ao amin'ny Salesforce. Ny mpitantana kaonty dia afaka mamorona, manavao ary mampifanaraka an-tsoratra ireo fifanarahana lehibe na aiza na aiza, manala ny filana miditra ao amin'ny Salesforce mivantana, mipoitra eo anelanelan'ny fitaovam-pivarotana hafa, na mavesatra amin'ny fanaovana kopia sy fametahana fampiharana iray mankany amin'ny iray hafa.
Scratchpad Command dia azo ampiasaina ihany koa raha misy mpitantana kaonty miditra amin'ny vondrom-barotra, manampy azy ireo hanavao ny Salesforce raha mifandray amin'ny namany sy ny mpiara-miasa aminy na aiza na aiza amin'ny Internet. Ho fanampin'izany, ireo mpitarika ny varotra dia mahazo tombony amin'ny fidirana eo noho eo amin'ny angon-drakitra Salesforce nohavaozina ao am-piasana ao anatin'ireo fitaovana forecasting ankafiziny sy ny rafitra BI, na ireo tabilao fanaovana tatitra anatiny namboarina.
Ny mpanjifa dia afaka mametraka Scratchpad ho a Plug-in Chrome, mifandraisa amin'ny Salesforce ary manavao fanavaozana ny fantson'izy ireo afaka 30 segondra na latsaka. Scratchpad dia mifandray amin'ny Salesforce eo noho eo ary manome ny mpivarotra fifandraisana haingana sy maoderina hifaneraserana amin'ny angon-drakitra sy ny fizotrany. Salesforce dia mijanona ho angon-drakitra an-tsoratra, raha i Scratchpad kosa no teboka fifampiraharahana ankafizin'ny ekipa miditra.
Raha ny momba ny solontenan'ny varotra dia tsy misy na inona na inona marina kokoa noho ilay andianteny ny fotoana dia vola. Ary rehefa tapahina roa ny fotoana (sy ny vola) noho ny tsy fahombiazan'ny fitaovana sy ny rindranasa rehetra izay heverina fa hampivoatra ny asany, dia olana tsy ho an'ny mpivarotra ihany izany fa hatrany amin'ny faran'ny fandaminana. . Ny Scratchpad Command dia mamela ny mpitantana kaonty hitantana haingana ny fantsona misy azy miaraka amin'ny sehatr'asa natambatra mora ampiasaina, mba hahafahan'izy ireo miverina manakatona fifanarahana bebe kokoa ary misy akony lehibe kokoa amin'ny orinasa.
Nancy Nardin, mpanorina, Fitaovana fivarotana marani-tsaina
Scratchpad Command dia azo alaina ho an'ny mpampiasa freemium sy karama.
Sehatr'asa natambatra Scratchpad
Scratchpad dia manome sehatr'asa mitambatra eo amin'ny kalandrie, naoty varotra ary Salesforce. Sambany, ny mpanatanteraka kaonty, ny solontena amin'ny fampandrosoana ny varotra (SDR), na ny mpitantana ny varotra izay mampiasa Salesforce dia afaka miditra sy mamorona naoty, manampy ary manatsara ny fifandraisana vaovao, ary mamorona sy mitantana asa mivantana avy amin'ny kalandrieny.
Ny tetiandro, ny fakana an-tsoratra, ny lahasa ary ny Salesforce dia ampahany manandanja amin'ny andron'ny mpivarotra rehetra, saingy mifamatotra tanteraka izy ireo ary tsy tafiditra ao anatin'ny fivezivezin'ny mpivarotra. Nandritra ny fotoana lava loatra, ireo matihanina amin'ny varotra isaky ny fikambanana dia niara-niasa tamina rindrambaiko sendra mba hamoronana sehatr'asa fivarotana azy manokana. Ireto hacks ireto dia namboarina tamin'ny filàna hitazonana ny fandaminana, fitantanana fivoriana, fanavaozana ary fizarana naoty momba ny varotra, hanarahana ny dingana manaraka, hametrahana lahasa, hiantohana ireo asa tsy misy tohana ary hiara-hiasa amin'ny ekipam-bola.
Vokatr'izany, ireo sehatr'asa ireo dia mitaky fitantanana angon-drakitra mandreraka sy manara-penitra, ka manery ireo mpiasan'ny varotra handany fotoana be dia be amin'ny fidirana data fa tsy hivarotra amin'ny mpanjifa. Raha ny marina, ny tatitra iray avy amin'ny Salesforce dia nanambara fa ny 34 isan-jaton'ny fotoanan'ny mpivarotra dia tsy mandany afa-tsy XNUMX isan-jato. Ny ekipan'ny RevOps sy SalesOps dia mitohy mihasosotra satria ireo rafitra voajirika ireo dia tsy mifandray amin'ny loharanon'ny fahamarinana data - Salesforce.
Fanazavana fanampiny Ampio amin'ny Chrome
Tags: Chrome plugingoogle chromeplugin chrome googleNancy nardinPouyan Salehpouyan salehisalesforcegorodonabaiko gorodonafitaovana fivarotana marani-tsaina